<<first <prev (11) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next> last>>
Hot News-04 Feb 2010
Posted By - Ko Ko - February 4, 2010
Lee Ji-ah goes to Cambodia even with her leg cast
Cambodia တွင်မင်းသမီး Lee Ji-ah လူမှုရေးများလုပ်နေခြင်း
မင်းသမီး Lee Ji-ah ဟာ ခြေထောက် ဒါဏ်ရာ ကြောင့် ညာခြေထောက် plaster ကိုင်ထားရ ပါတယ်။ ယခု မင်းသမီး ဟာ plaster ကိုင်ရက် ကြီးနဲ့ Cambodia မှာ လူမှုရေး လုပ်ငန်း တွေသွား လုပ်နေ ပါတယ်။
Lee Ji-ah ဟာ Legend, Beethoven Virus, Style စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေနဲ့ တဟုန်ထိုး နာမည် ကြီးလာ ခဲ့သူ ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Lee Ji-ah goes to Cambodia even with her leg cast
Song Seung-heon Filminganew film in Thailand
ဂျွန်စော Thai တွင်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေခြင်း
မင်းသား Song Seung-heon ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ မှာ No Enemies အမည် ရှိတဲ့ ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင် ကား ရိုက်နေ ပါတယ်။
ထိုင်း fan များဟာ မင်းသား ရှိတဲ့ နေရာ တိုင်းမှာ အုပ်လိုက်ကြီး လိုက်နေ ကြတယ် လို့ဆို ပါတယ်။
Source : Song ရ Filminganew film in Thailand
USA မှာ ၂၀၀၆ နဲ့ ၂၀၀၇ က show ပွဲများ ဖျက်ခဲ့ခြင်း အတွက် Rain နဲ့ သူ့ရဲ့ agency ဟောင်း တို့ကို Star M အမည်ရှိ US ကုမ္ပဏီ က ကိုးရီးယား တရားရုံး မှာ တရား စွဲထား ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ရရှိတဲ့ သတင်း အရ၊ တရား ရုံးက Rain ကို အနိုင် ပေးလိုက် တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Court rules in favor of Rain over cancelled U.S. concerts
Jeon Ji-hyeon, Zhang Ziyi pull out of Wayne Wang film
Jeon Ji-hyeon နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မှနှုတ်ထွက်ခြင်း
Jeon Ji-hyeon ဟာ နာမည်ကြီး တရုတ် မင်းသမီး Zhang Ziyi နဲ့တွဲပြီး ဒါရိုက်တာ Wayne Wang ရဲ့ Snow Flower and the Secret Fan အမည်ရှိ တရုတ်ကား တစ်ကား ရိုက်ဖို့ စီစဉ် ထား ပါတယ်။
မင်းသမီး Jeon Ji-hyeon, Zhang Ziyi အပြင် ခေါင်းဆောင် မင်းသားပါ ၄င်း ရုပ်ရှင်မှ နှုတ်ထွက် သွားကြ တယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Jeon Ji-hyeon, Zhang Ziyi pull out of Wayne Wang film
Free drama boosts the Korean Wave
Shining Inheritance ဖာတ်လမ်းတွဲ ဟာ ၂၀၀၉ မှာ အလွန် လူကြိုက် များခဲ့ ပါတယ်။
ကိုးရီးယား Foundation for International Culture Exchange ဟာ ကိုးရီးယား ကားများ ပြန့်ပွားရေး အတွက်၊ ၄င်း ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို ဝယ်ယူပြီး၊ နိုင်ငံပေါင်း ၈၁ နိုင်ငံမှာ ပြသ နိုင်အောင်၊ အခမဲ့ ဝေငှ မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ဒီလို အခမဲ့ ပေးပစ်တဲ့ နိုင်ငံ တွေထဲမှာ ကိုးရီးယား ကားတွေ နာမည် ရပြီးသား ဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ ဂျပန် နဲ့ အရှေ့တောင် အာရှ နိုင်ငံတွေ မပါဘူး လို့ သီရ ပါတယ်။
Source : Free drama boosts the Korean Wave
Kim Yoon-jin ကိုယ်ပိုင်အေဂျင်စီထောင်ခြင်း
USA က Lost ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေနဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဖြစ်လာတဲ့ ကိုးရီးယား မင်းသမီး Kim Yoon-jin ဟာ Zion Entertainment အမည် ရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင် agency တစ်ခု ထောင်လိုက်တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
USA က William Morris Endeavor Entertainment နဲ့ ပူတွဲပြီး အနုပညာ လုပ်ငန်း များကို ကိုယ်စလှယ် အဖြစ် ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Kim Yoon-jin sets up entertainment firm
Yoo Ji-tae and Kim Hyo-jin Couple Donate 20 Million Won to Haiti
မင်းသား မင်းသမီး လင်မယား ဖြစ်ကြတဲ့ Yoo Ji-tae(33) နဲ့ Kim Hyo-jin(25) တို့ အတွဲဟာ Haiti ငလျင် ဘေးအတွက် won 20 million ကို World Vision NGO အဖွဲ့မှ တဆင့် လှူဒါန်း တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Yoo Ji-tae and Kim Hyo-jin Couple Donate 20 Million Won to Haiti
Kim Seon-ah Hold First Fan Meeting in Japan
Kim Seon-ah ဂျပန်တွင် Fan Meet ပြုလုပ်ခြင်း
မင်းသမီး Kim Seon-ah ဟာ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့က ဂျပန် နိုင်ငံမှာ သူ့ရဲ့ ပထမ ဆုံး fan meet ပြုလုပ် ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Kim Seon-ah ဟာ My Name is Kim Sam-soon ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ မင်းသား Hyun Bin နဲ့ တွဲပြီး နာမည် ရလာ သူဖြစ် ပါတယ်။
Source : Kim Seon-ah Hold First Fan Meeting in Japan and Hints at Film Role
2PM အဆိုတော် Taecyeon ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်တော့ မလား?
2PM ရဲ့ အဆိုတော် Taecyeon ဟာ Cinderella's Sister အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင် မယ်လို့ သတင်း ထွက်လာ ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အေဂျင်စီ JYP Entertainment ကတော့ ဘာမှ အတည် မဖြစ်သေး ပါဘူးလို့ ပြောသွား ပါတယ်။
Source : 2PM Taecyeon mulling TV acting debut
Kwon Sang-woo and his son, Lukhee
မင်းသား Kwon Sang-woo နဲ့ မင်းသမီး Son Tae-yeong တို့ဟာ သားဦးလေး Lukhee ကို ထုတ်ကြွား ပါပြီး။
Kwon Sang-woo နဲ့ သားငယ် Lukhee ရဲ့ ပုံကို Son Tae-yeong ရဲ့ website မှာ တင်ထား တာ တွေ့ရ ပါတယ်။
Source : Kwon Sang-woo and his son, Lukhee
Harmony က Avatar ကိုကျော်တက်ပြီး
ပြသဆဲ ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင် Avatar ဟာ လူကြိုက် အများဆုံး ဖြစ်နေတာ ရက်ပေါင်း ၇၈ ရက်ရှိခဲ့ ပြီးတဲ့ နောက်မှာ၊ မင်းသမီး Kim Yun-jin ပါဝင်တဲ့ ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင် Harmony က ကျော်တက်ပြီး ထိပ်ဆုံး ရောက်သွား ပါတယ်။
Kim Yun-jin ဟာ US ဇာတ်ထမ်းတွဲ LOST နဲ့ ကမ္ဘာ ကျော် ခဲ့တဲ့ ကိုးရီးယား မင်းသမီး ဖြစ် ပါတယ်။
Source : "Harmony" topples "Avatar" on daily admissions chart
မင်းသား Jang Dong-gun နဲ့ မင်းသမိး Ko So-young တို့ လက်ထပ်ပွဲ ရက် သတ်မှတ် ပြီးပြီး ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ အတော် ပျံ့နေ ပါတယ်။
ဒီသတင်း မမှန် ကြောင်းကို မင်းသမီး နဲ့ မင်းသား တို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ သတင်း ရပ်ကွက် များမှ ငြင်းဆို ထာကြ ပါတယ်။
Source : Jang Dong-gun, Ko So-young deny mid-May wedding rumor
Rain ရဲ့ဂျပန် Concert ပွဲအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခြင်း
အာရှ စူပါစတား Rain ရဲ့ ဂျပန် နိုင်ငံ Osaka မှာ ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ concert ပွဲ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံး သွားတယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ်။
Rain ဟာ Osaka မြို့မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်က နောက်ဆုံး concert ပွဲပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၂၃ နဲ့ ၂၄ ရက်နေ့ များမှာ ပြုလုက် ခဲ့တဲ့ Legend of Rainism အမည်ရှိ concert ပွဲကို ပရိသတ် ၈၀၀၀ ကျော် တက်ရောက် ခဲ့တယ် လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Rain wraps up Osaka concert in success
မင်းသား Lee Won မတ်လ ထဲမှာ စစ်ထဲ ဝင်တော့မယ် ဆိုတာ မဟုတ်မှန် ကြောင်း မင်းသားရဲ့ agency မှငြင်းဆို သွား ပါတယ်။
မင်းသား Lee Won (26) ဟာ လာမည့် မတ်လ ထဲမှာ ဂျပန် နိုင်ငံတွင် fan meet ပြုလုပ် မယ် လို့လည်း ၄င်းရဲ့ agency မှ ပြောကြား သွား ပါတယ်။
Source : Lee Wan denies rumors of entering military in March
Son Ye-jin နဲ့ Lee Min-ho(F4) တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ
နာမည်ကျော် မင်းသမီး Son Ye-jin ဟာ F4 မင်းသား Lee Min-ho နဲ့ တွဲပြီး ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကြ တော့မယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Personal Taste လို့ အမည်ရှိ MBC မှ ရိုက်မယ့် ၄င်း ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို မတ်လ ထဲမှာ ပြသမယ် လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Son Ye-jin to star in new drama with Lee Min-ho
အာရှ ၁၃ နိုင်ငံမှာ စစ်တမ်း ကောက်ယူချက် အရ ကိုးရီးယား ဟာ သီချင်း illegally downloaded ဒုတိယ အများဆုံး လုပ်တဲ့ နိုင်ငံ လို့ဆို ပါတယ်။ တရုတ် နိုင်ငံက ပထမ ရပါတယ်။
စစ်တမ်း ကောက်ယူပုံ စနစ် မကျတဲ့ အတွက် ဒီ သတင်း မှာတယ် လို့Koreas Culture Ministry က ငြင်းဆို ထား ပါတယ်။
Source : Korea World's No.2 in Online Music Piracy
ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင် Avatar ဟာ ကိုးရီးယား မှာ ၃၈ ရက် အတွင်းမှာ ကြည့်သူ ၁၀ သန်းကျော် သွားတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Seoul မြို့မှာ စနေနေ့ တစ်ရက်ထဲ မှာတွင် လူ ၂၆၀, ၀၀၀ ကြည့်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Source : 'Avatar' Approaches Korean Attendance Record
Lee Da-hae speaks out against rumors
ကျွန်မတို့မကြိုက်ကြပါဘူ (Lee Da-hae)
မင်းသမီး Lee Da-hae နဲ့ မင်းသား Kang Ji-hwan တို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ခိုးတွေ့ ကြတယ် လို့ သတင်း တွေ ထွက်လာ ပါတယ်။
ကျွန်မက ကိုယ့် ကိစ္စ နဲ့ ကိုယ် Thai ကို သွား တာပါ။ Kang ကလည်း သူ့ဟာသူ ရောက်နေ တာပါ။ ဘာမှ မသက်ဆိုင် ပါဘူးလို့ Lee Da-hae က ငြင်းဆို သွား ပါတယ်။
Source : Lee Da-hae speaks out against rumors
Actor Lee Byeong-heon appears on CNN Talk Asia
Lee Byeong-Heon ကို CNN မှအင်တာဗျူးခြင်း
ကမ္ဘာကျော် CNN သတင်း အဖွဲ့မှ မင်းသား Lee Byeong-Heon ကို ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ က interview လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
ကိုးရီးယား မင်းသား မင်းသမီး တွေ ဟောလီဝုဒ် မှာ ပေါက်မြောက် ဖို့ဆိုတာ အိမ်မက် မဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ တစ်ကယ် ဖြစ်နေ ပါပြီး လို့ မင်းသား က ပြောသွား ပါတယ်။
Source : Actor Lee Byeong-heon appears on CNN Talk Asia
Lee Byeong-heon questioned by authorities all night
Lee Byeong-Heon ကိုညလုံးပေါက်ရဲမှစစ်ဆေးခြင်း
မင်းသား Lee Byeong-Heon ကို ကိုးရီးယား ရဲအဖွဲ့ မှ ညလုံးပေါက် ခေါ်ယူ စစ်ဆေး တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ကနေဒါ နိုင်ငံသူ တစ်ဦးက မင်းသား ကို ဖြားယောင်းမှု နဲ့ တရားစွဲထား ပါတယ်။ မင်းသား ကလည်း အသရေ ဖျက်မှုနဲ့ တန်ပြန် တရားစွဲ ထား ပါတယ်။ ၄င်း အတွက် ယခုလို ခေါ်ယူ စစ်ဆေးတာ လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Byeong-heon questioned by authorities all night
The Slave Hunters ဇာတ်လမ်းတွဲအောင်မြင်နေခြင်း
ပြသဆဲ The Slave Hunters(KSB) ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ rating 33.7 percent ရပြီး တော်တော် အောင်မြင် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ မင်းသား Jang Hyeok မင်းသား Oh Ji-ho နဲ့ မင်းသမီး Lee Da-hae တို့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထား ပါတယ်။
Source : "The Slave Hunters" continues to draw larger audience
Han Chae-young to join Lee Byeong-heon for "The Influence"
Han Chae-young ရဲ့ Online ရုပ်ရှင်
Barbie Doll လို့ နာမည်ပြောင် ရထားတဲ့ မင်းသမီး Han Chae-young ဟာ online မှ ပြသမည့့်် The Influence အမည်ရှိ ရုပ်ရှင် မှာ ပါဝင် မှာဖြစ် ပါတယ်။ မင်းသား ကတော့ Lee Byeong-Heon ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Han Chae-young to join Lee Byeong-heon for "The Influence"
ဂျပန်မှာဆုသုံးဆုရတဲ့ Bae Do-na
ကိုးရီးယား မင်းသမီး Bae Do-na ဟာ ဂျပန် နိုင်ငံမှာ အကောင်းဆုံး မင်းသမီးဆု ၃ ဆု ရတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
ဂျပန် မှာက မြန်မာ နိုင်ငံ မှာလို အဖွဲ့ တစ်ခု ထဲက အကယ်ဒမီ ဆု ပေးတာ မဟုတ် ပါဘူး၊ အဖွဲ့ အစည်း အမျိုးမျိုး က သီးခြားစီ ပေးကြ တာပါ။
အခုလို အဖွဲ့ သုံးခု ကနေ အကောင်းဆုံး မင်းသမီး ဆု တွေပေး ကြတာ ဆိုတော့၊ တော်တော် ကြိုက်ကြ လို့ ဖြစ်မှာပါ။
Source : Actress Bae Doona wins third award in Japan
Comedian to Be Questioned Over Bar Brawl
Lee Hyeok-jae ကိုရဲမှခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်း
လူရွှင်တော် Lee Hyeok-jae အား ရဲမှ ခေါ်ယူ စစ်ဆေး တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ Lee Hyeok-jae နဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်း တို့ဟာ စားသောက်ခန်း တစ်ခုက အမှုထမ်း တွေကို ရန်ဖြစ်ပြီး ရိုက်ခဲ့ တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Comedian to Be Questioned Over Bar Brawl
Kang Dong-won, Song Hye-kyo start filming "Love for Sale"
Song Hye-kyo (အွန်စော) ဟာ Camellia လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင် ကား အသစ် တစ်ကား စတင် ရိုက်နေ ပြီးလို့ သိရ ပါတယ်။ မင်းသား ကတော့ Kang Dong-won ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Kang Dong-won, Song Hye-kyo start filming "Love for Sale"
Police arrest Kang for assault
Kang Byung-kyu ကိုရဲမှအမှုဖွင့်ခြင်း
TV အစီအစဉ် သရုပ်ဆောင် Kang Byung-kyu(37) ကို ရဲမှ ရန်ဖြစ် ပြီး လူရိုက်မှုနဲ့ အမှုဖွင့် အရေး ယူထား တယ်လို့ သတင်းရရှိ ပါတယ်။
မင်းသား Lee Byeong-Heon နဲ့ သူ့ရဲ့ girl friend ဟောင်း တို့ အပြန် အလှန် တရား စွဲဆိုမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ကွင်း ထဲမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရန်ပွဲ ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Police arrest Kang for assault
Koreaacomputer graphics hub
ကမ္ဘာ့ Computer Graphics ဗဟိုဖြစ်အောင်လုပ်မည်
ကိုးရီးယား ကို ကမ္ဘာ့ Computer Graphics လောက ရဲ့ ဗဟို ချက်မ ဖြစ်အောင် လုပ်ရန် ကိုးရီးယား Ministry of Calture မှ 200 billion won (US$178 million) ရင်းနှီး မည်လို့ သိရ ပါတယ်။
Computer Graphics အများ အပြား သုံးပြီး ကမ္ဘာ တဝှမ်းမှာ ဝင်ငွေ US$1.6 billion ရရှိ နေတဲ့ ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင် Avatar ကို သတိ ပြုမိ ကြရန် ဆောင်းပါး က ထောက်ပြ သွား ပါတယ်။
Source : Koreaacomputer graphics hub
Choi Jeong-won's "Star" rising in China
မင်းသမီး Choi Jeong-won ဟာ လောလောဆယ် တရုတ်ပြည် မှာ အထူး ရေပန်းစား နေ ပါတယ်။ မင်းသမီး ရဲ့ Wish UponaStar နဲ့ Famous Princesses ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေကို တစ်အား ကြိုက်ကြ တယ်လို့ ဆို ပါတယ်။
Choi Jeong-won ဟာ အနုပညာ လောက ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ် က ခြေချ ခဲ့ပြီး၊ All In (SBS, 2003), King and I (SBS, 2007) နဲ့ Land of wind (KBS2, 2008) တို့မှာ ပါဝင် ခဲ့ပြီး၊ KBS Acting Awards နှစ်ဆု ရရှိ ထားသူ ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Choi Jeong-won's "Star" rising in China
Jang Dong-gun အောင်မြင်စွာခွဲစိတ်ပြီးခြင်း
မင်းသား Jang Dong-gun ကို Seoul အထွေထွေ ဆေးရုံကြီး မှာ မကြာမှီ က ဒူးခေါင်း ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်တယ် လို့ဆို ပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်က Taegukgi အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ရိုက်စဉ် က ရခဲ့တဲ့ ဒါဏ်ရာ ဟောင်းကို ပြန်လည် ခွဲစိတ် တာဖြစ် ပါတယ်။
Source : Actor Jang Dong-gun Has Successful Surgery on Knee
Lee Byeong-heon in the second Hollywood movie!
Lee Byeong-Heon နှင့် G.I Joe အမှတ်(၂)
မင်းသား Lee Byeong-Heon ရဲ့ ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင် G.I Joe အမှတ်(၂ )ကို လာမယ့် ဇွန်လ မှာ ရိုက်ကူး မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ မင်းသား ဟာ ဦးဆောင် မင်းသား တစ်ဦး အဖြစ်မှာ ဖြစ်ာ ပါတယ်။
G.I Joe အမှတ်(၁) ဟာ ကြည့်သူ သန်း၂၈၀ ရှိခဲ့ပြီး၊ ဝင်ငွေ US$300 million ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
Source : Lee Byeong-heon in the second Hollywood movie!
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/483/hot-news-04-feb-2010
Hot News-16 Jan 2010
Posted By - Ko Ko - January 16, 2010
Wonder Girls Currently Voted No.1
for 'Video of The Year' in U.S.
Wonder Girls တိုင်ထိပ်ရောက်သွားပြီး
Wonder Girls အဆို အဖွဲ့ရဲ့ Nobody အမည် ရှိတဲ့ သီချင်းဟာ USA. Billboard aggregate 2009 Hot Single Sales of the Year Chart ရဲ့ #1 နေရာကို ရောက်ရှိ သွား ပါတယ်။
Pretty Wings (by Maxwell) က #2 နဲ့ Upset (by Mariah Carey) #3 ရရှိ ကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Wonder Girls အဆို အဖွဲ့ရဲ့ Nobody သီချင်း ဟာ North America တိုက်ရဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မှာ အရောင်း ရဆုံး သီချင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
၂၀၀၉ အောက်က်ိုဘာ က USA Billboard Hot 100 ရဲ့ #76 နေရာကို Wonder Girls အဆို အဖွဲ့ စတင် ရရှိခဲ့ ပါတယ်။
Source : Wonder Girls Currently Voted No.1 for 'Video of The Year' in U.S.
Bae Yong-joon New Drama Dropped
Bae Yong-joon ၏ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ဖျက်သိမ်းခြင်း
မင်းသား Bae Yong-joon နဲ့ ရိုက်ကူးရန် စီစဉ် ထားတဲ့ Drops of God အမည် ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို ဖျက်သ်ိမ်း လိုက်တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
ထုတ်လုပ် သူများ ဘက်က ဥပဒေ ပိုင်းဆိုင်ရာ အခက် အခဲများ ရှိနေလို့ ဖျက်သိမ်း ခဲ့ရတာ လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Bae Yong-joons New Drama Dropped
မင်းသား Kang Ji-hwan ရဲ့ agency ဟောင်းက မင်းသားကို တရား စွဲဖို့ ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။
မင်းသား ဟာ မကြာမှီ က S Plus Entertainment ဆိုတဲ့ agency အသစ်နဲ့ စာချုပ် အသစ် ချုပ်ဆို ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ agency အဟောင်းနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ် အဟောင်းက ပြီးဖို့ ရှစ်လ ကျန်နေ သေးတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Kang Ji-hwan may face lawsuit by former agency
Gong Yoo first fan meeting since military discharge
စစ်ပြန်ကြီး Gong Yoo ရဲ့ပထမဆုံး Fan Meet
၂ နှစ်ကြာ စစ်မှု ထမ်းပြီး မကြာမှီ က ပြန်ထွက် လာတဲ့ မင်းသား Gong Yoo ဟာ ပထမဆုံး fan meet ကို Seoul Yonsei University မှာ ဇန်နဝါရီ လ ၁၀ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။
ဒီပွဲကို Japan, Hong Kong, New Zealand နဲ့ Taiwan က fans တွေပါ တက်ရောက် ကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Gong Yoo first fan meeting since military discharge
Lee Min-ho ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်ရိုက်တော့မည်
F4 မင်းသား Lee Min-ho ဟာ MBC က ရိုက်မည့် Personal Taste လို့ အမည် ရှိတဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Min-ho to make comeback in new drama
Ko So-young and Jang Dong-gun return to Korea together
Jang Dong-gun နဲ့ Ko So-young တို့ပြန်လာကြပြီး
မင်းသား Jang Dong-gun နဲ့ မင်းမီး Ko So-young တို့ အတွဲဟာ USA မှာ သွားရောက် အပန်းဖြေ ပြီး မကြာမှီ က ကိုးရီးယား ကို ပြန်ရောက် လာကြ ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ဦးဟာ ချစ်သူများ ဖြစ်ကြောင်းကို နိုဝင်ဘာလ က ဝန်ခံ ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Jang Dong-gun and Ko So-young leave for vacation
Lee Hyeon-woo PublishesaCookbook
မင်းသား Lee Hyeon-woo ဟာ Happy Recipes of Happy Dad Lee Hyeon-woo လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ cookbook တစ်အုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ ပါတတ်။ သူ့ဇနီး ကိုယ်ဝန် ရှိစဉ်က ချက်ကျွေး ခဲ့တဲ့ ဟင်းအမယ် အများ အပြား ပါတယ်လို့ သီရပါတယ်။
Source : Lee Hyeon-woo PublishesaCookbook
Kim Hye-soo's admitting relationship with Park Hae-jin
မင်းသမီး Kim Hye-soo ဟာ ဇာတ်ပို့ မင်းသား တစ်ဦး ဖြစ်သူ မင်းသား Yoo Hae-jin နဲ့ တွဲနေပြီး ဆိုတာ ဝန်ခံလိုက် ပါတယ်။
ပရိသတ် များက မင်းသမီး နဲ့ မင်းသား တို့ကို congratulate လုပ်ခဲ့ ကြ ပါတယ်။ သို့သော် အတွေး တစ်ခု တော့ ဝင်နေကြ ပါတယ်။
ဒီလို အရုပ် ဆိုးဆိုး ဒုတိယ မင်းသားက ဘယ်လို လုပ်ပြီး၊ မိန်းမလှ လေးရဲ့ အချစ်ကို ရခဲ့ ပါလိမ့် လို့?
Premiere episode of KBS2 TV series "The Slave Hunters"
Lee Da-hae ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
Lee Da-hae ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ အသစ် The Slave Hunters - KBS2 (ရာဇဝင် ဇာတ်လမ်း) ဟာ ကိုးရီးယား မှာ စတင် ပြသ နေပြီး ဖြစ် ပါတယ်။
ပထမ အပတ် ပြသ ခဲ့ရာမှာ rating 24.8 percent ရလို့၊ အလားအလာ ရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်မယ်လို့ တစ်ပေး နေကြ ပါတယ်။
Lee Da-hae asamale character?
Jeon Ji-hyeon to appear in new film with Zhang Ziyi
Jeon Ji-hyeon နဲ့တရုတ်မင်းသမီး Zhang Ziyi
မင်းသမီး Jeon Ji-hyeon ဟာ နာမည်ကြီး တရုတ် မင်းသမီး Zhang Ziyi နဲ့ တွဲပြီး Snow Flower and the Secret Fan အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား ရိုက်တော့ မှာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီရုပ်ရှင် ကားဟာ အင်္ဂလိပ် စကားပြော ရုပ်ရှင် ဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာ Wayne Wang မှ ဦးစီး ရိုက်ကူး မှာဖြစ် ပါတယ်။
Jeon Ji-hyeon Cast in 'Snow Flower and the Secret Fan'
Kim Ha-neul လစဉ် Online မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခြင်း
မင်းသမီး Kim Ha-neul ဟာ သူ့ရဲ့ official website (www.joneplus.co.kr/kimhaneul) မှနေပြီး လစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင် ထုတ်ဝေ လိုက် ပါတယ်။
ဒီ မဂ္ဂဇင်း မှာ မင်းသမီး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း အရာ စုံစုံလင်လင် ပါမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁) ကို အင်္ဂလိပ် ကိုးရီးယား နှစ် ဘာသာ နဲ့ ထုတ်ဝေ ထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
Source : Kim Ha-neul launches online magazine on official website
Jang Dong-gun ဒူးခေါင်းခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်း
မင်းသား Jang Dong-gun ဟာ မကြာမှီ က ဆေးရုံ တက်ပြီး ဒူးခေါင်း ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ်။
ဆေးရုံ တစ်ပတ်ကျော် တက်ရောက် ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ကို မသိ ရသေးပါ။
Taegukgi (2003) အမည်ရှိ ရုပ်ရှင် ရိုက်စဉ် က ရရှိ ခဲ့တဲ့ ဒါဏ်ရာ ဖြစ် ပါတယ်။ ၂၀၀၃ နှစ်က ပထမ အကြိမ် ခွဲခဲ့ ပြီး၊ ယခု ဒုတိယ အကြိမ် ခွဲတာဖြစ် ပါတယ်။
Source : Jang Dong-gun to Have Knee Surgery
Hyeon Bin visit Japan
Hyeon Bin ဂျပန်သွားခြင်း
ဂျပန် Fuji TV ရဲ့ ဖိတ်ခေါ် မင်းသား Hyun Bin ဟာ ဂျပန် သွာပြီး promotion များ ပြုလုပ်နေ ပါတယ်။
ယခု ဂျပန် TV တွေမှာ မင်းသားရဲ့ (၁) My Name is Kim Sam-soon နဲ့ (၂) Friend, Our Story ဇာတ်လမ်တွဲ နှစ်ခု တပြိုင်နက် ပြနေ ပါတယ်။
Hyun Bin ဟာ မင်းသမီး Song Hye-kyo (အွန်စော) ရဲ့ ချစ်သူ ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Hyeon Bin visit Japan
နာမည်ကြီးမင်းသမီးများကိုကြည့်ရမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ တန်းစီပြီး ထွက်လာမည့် TV ဇာတ်လမ်းတွဲ များမှာ၊ နာမည်ကြီး မင်းသမီး များ ဖြစ်တဲ့ Lee Da-hye, Han Hye-jin, Bae Doo-na, Han Go-eun နဲ့ Kong Hyo-jin တို့ကို တဝကြီး ကြည့်ကြ ရတော့ မှာဖြစ် ပါတယ်။
Source : Heroines Line Up for Dramas in 2010
Lee Na-young ရဲ့ ဖေဖေဟာမမဖြစ်နေတယ်ရုပ်ရှင်
မင်သမီး Lee Na-young ဟာ Lady Daddy အမည်ရှိ ဟာသ ရုပ်ရှင် တစ်ကား ရိုက် ပါတယ်။
ဒီကား ထဲမှာ Lee Na-young ဟာ မူလက ယောက်ျား ပါ။ နောက်တော့ ခွဲစိတ်ပြီး မိန်းမ ဘဝ ပြောင်းလိုက် ပါတယ်။ (transgender)
မမျှော်လင့် ပဲ ခလေး တစ်ယောက် (ယောက်ျားလေး) ရောက်လာ ပါတယ်။ သူယောက်ျား ဘဝ တုံးက မသိ ပဲနဲ့ ရထားတဲ့ သူ့သားပါ။
ဒီတော့ ဇာတ်လမ်းတွေ ရှုတ်ကုန်ရော။ ဒါကို နောက်ခံ ထားပြီး ဟာသ ရုပ်ရှင် အဖြစ် ဖန်တည်း ထား တာပါ။
Press meeting for new film, "Lady Daddy"
ရုပ်ရှင်သစ် Woochi ဟာ လူကြိုက် များနေ ပါတယ်။ တချို့က ကိုရီးယား Harry Potter လို့ တင်စါးကြ ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ က နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း ရုပ်ရှင်ရုံ ၅၉၇ ရုံမှာ တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ရုံတင်ခဲ့ ပါတယ်။ ပထမ တစ်ရက် ထဲတင်၊ ကြည့်သူ ၂၀၁,၆၈၂ ရှိခဲ့ပြီး စံချိန်တင် ခဲ့ ပါတယ်။
Lee Young-ae ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ က Hawaii မှာ လက်ထပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ထိုစဉ်က သူဟာ ကိုးရီယား နိုင်ငံ Hanyang University မှာ Ph.D တက်နေ ရတဲ့ အတွက် honeymoon မထွက်ခဲ့ ရပါ။ ယခုမှ အချိန် ရလို့ ပျားရည်ဆမ်း ခရီး ထွက်သွားတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Young-ae off to her late honeymoon
Will Sin Se-kyeong Be the Hottest TV Star of 2010?
လူကြိုက်များနေတဲ့ မင်းသမီး Sin Se-kyeong
ကိုးရီးယား ဇာတ်ညွှန်းဆရာ, ကြော်ငြာ ဆရာ, အလှဖန် တည်းရှင် နဲ့ ထုတ်ဝေသူ တို့ကို မဲ စနစ်နဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အလားအလာ အရှိဆုံး မင်းသမီး တစ်ဦး ကိုရွေးချယ် ခိုင်းခဲ့ ပါတယ်။
မဲ အများဆုံး ရသူ ကတော့ မင်းသမီး Sin Se-kyeong ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Will Sin Se-kyeong Be the Hottest TV Star of 2010?
Actress Kim Hee-seon Set to Make Comeback
Kim Hee-seon ပြန်လာတော့မည်
Kim Hee-seon (လွမ်းမပြေ ဇာတ်လမ်းတွဲ) ဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ် ပြီး သမီးလေး တစ်ယောက် ထွန်းကား ခဲ့ ပါတယ်။
ထိုစဉ် ထဲက သရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို ခေတ္တ ရပ်နား ထားခဲ့ ပါတယ်။ ယခု ခင်ပွန်းရဲ့ ထောက်ခံမှု အပြည့်နဲ့ ပြန်လည် သရုပ်ဆောင် တော့မယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Actress Kim Hee-seon Set to Make Comeback
Kim Hee-seon's family picture
Kim Hee-seon ရဲ့မိသားစုဓါတ်ပုံ
မင်သမီး Kim Hee-seon ဟာ သူ့ရဲ့ website မှာ သမီးငယ် ခင်ပွန်း တို့နဲ့ တွဲရိုက် ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကို တင်ထားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
သမီးဦး Yeona ရဲ့ တနှစ်ပြည့် မွေနေ့ မှာ ရိုက်ထားတာ ဖြစ်ပြီး၊ မှတ်ချက် များလည်း ရေးထား ပါတယ်။
Source : Kim Hee-seon's family picture!
Ko Hyeon-jeong to turn 1st female president in new drama
၂၀၀၉ ခုနှစ် မှာ Queen Seon-deok ဇာတ်လမ်းတွဲ နဲ့ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည် ကြီး ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Ko Hyeon-jeong ဟာ MBC က ထုတ်လွှင့် မည့် Daemul အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ သရုပ်ဆောင် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး သမတ တစ်ဦး အဖြစ် သရုပ်ဆောင် မှာဖြစ် ပါတယ်။
Source : Ko Hyeon-jeong to turn 1st female president in new drama
Lee Joon-ki voted top Hallyu Star of 2009
Finance and Economy News စာစောင်က ပရိသတ် ကို 2009 My Vote for Top Stars of the Year ခေါင်းစဉ်နဲ့ online စစ်တမ်း ကောက်ခဲ့ ပါတယ်။
Lee Joon-ki ဟာ မဲပေးသူ ၂၆၀၇၈ ရဲ့ ၄၀% မဲရ ခဲ့ပြီး No.1 Hallyu Star of 2009 အဖြစ် အရွေးချယ် ခံခဲ့ရ ပါတယ်။
အခြား category တွေမှာ မှာလည်း မဲပေး ခဲ့ကြရာ၊ ပထမ နေရာ တွေမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ရရှိ ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Male idol group : TVXQ (56.6 %)
Female idol group : Girls' Generation (41.1 %)
Solo singer : Rain (31.1 %)
Actor : Yoo Seung-ho (34.5 %)
Actress : Han Hyo-joo (52.4 %)
Drama : "Shining Inheritance" (33.3 %)
Film : "Take Off" (29 %)
Source : Lee Joon-ki voted top Hallyu Star of 2009
အရှေ့တိုင်း တရုတ် နခ္တတ် ဗေဒ အရ၊ ၂၀၁၀ နှစ်ဟာ ကျားနှစ် (Year of Tiger) ဖြစ်ပါတယ်။ ကျားဟာ ရဲရင့်ခြင်း၊ အင်အားကြီးခြင်း၊ တည်ငြိမ် ရင်ကျက်ခြင်း တို့ကို ကိုယ်စား ပြု ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်ဟာ လဘ်ကောင်းခြင်း နဲ့ နိုးကြား ထကြွခြင်း တို့ကို ဆောင်ကျဉ်း မည့်နှစ် လို့ ဆိုထား ပါတယ်။
ကျားနှစ်မှာ မွေးဖွား ခဲ့သူ တို့ရဲ့ ကောင်းခြင်း အဖြာဖြာ ကို ကျမ်းစာ တွေမှာ အထူး အမွှန်း တင်ထား ပါတယ်။
1986, the year of the tiger မှာ မွေးဖွား ခဲ့သူ များမှာ၊ Micky, Hero, U-Know နဲ့ Kim Hyun-joong ----
1974, the year of the tiger မှာ မွေးဖွား ခဲ့သူ များမှာ၊ Eom Tae-woong, Sin Ha-gyoon, Joo Jin-mo, Moon So-ri နဲ့ Kim Ji-young ----
1962, the year of the tiger မှာ မွေးဖွား ခဲ့သူ များမှာ၊ Choi Min-sik, Choi Min-soo, Choi Soo-jong, Choi Yang-rak နဲ့ Choi Myeong-gil ----
1950, the year of the tiger မှာ အဆိုတော် Cho Yong-pil တို့ကို အသီးသီး မွေးဖွား ခဲ့ကြတယ် လို့ဆို ပါတယ်။
Source : 2010 The Year of the Tiger
Girls get busy while the boys hang on the side
မိန်းခလေး Music Group များကံကောင်းသောနှစ်
၂၀၀၉ မှာ Wonder Girls, Girls' Generation, Brown Eyed Girls စသည့် မိန်းခလေး အဆို အဖွဲ့ များ အထူး အောင်မြင် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
ယောက်ျားလေး အဆို အဖွဲ့ များ ကတော့ ကံသိတ် မကောင်း ကြပါ။ အမှု ဖြစ်ခြင်၊ တရားစွဲခြင်း၊ နှုတ်ထွက်ခြင်း စတဲ့ ပြသနာ တွေဖြစ် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Source : Girls get busy while the boys hang on the side
Lee Deok-hwa recovering afterasurgery
မင်းသားကြီး Lee Deok-hwa ခွဲစိတ်ရခြင်း
မင်းသားကြီး Lee Deok-hwa ဟာ ကား accident ဖြစ်ပြီး ခွဲစိတ် ခဲ့ရ ပါတယ်။ ၁၃ နာရီကြာ ခွဲစိတ် ခံခဲ့ ရပြီး၊ ယခု အနားယူ နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Lee Deok-hwa recovering afterasurgery
မင်းသမီး Choi Jin-sil ရဲ့ အုတ်ဂူ ဖေါက်သူ Park (41) ကို တရားရုံး က ထောင်ဒါဏ် ၁နှစ် နဲ့ ခြောက်လ အပြစ် ပေးလိုက် တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Choi Jin-sil (40) ဟာ Oct. 2, 2008 က မိမိ ကိုယ် မိမိ သတ်သေ သွားခဲ့ ပါတယ်။ ၄င်းရဲ့ အုတ်ဂူကို Aug-2009 မှာ ထေါက်ထွင်း ခိုးယူ ခံခဲ့ ရပါတယ်။
Source : Actress urn thief sentenced to 1.5 years in jail
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/482/hot-news-16-jan-2010
Hot News-31 Dec 09
Posted By - Ko Ko - December 30, 2009
Rain's Concert In Las Vegas
Rain ရဲ့ USA ဂီတပွဲ
အဆိုတော် မင်းသား Rain ဟာ Caesars Palace Hotel in Las Vegas USA မှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ နဲ့ ၂၅ နေ့တိှု့က ၂ နာရီကြာ nonstop concert ပွဲကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။
Concert ပွဲအတွက် သီဆိုခ 530 million won (US$1=W1,184) ရတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။ ငွေတွေ ထာစရာ နေရာ မှ ရှီရဲ့ လား မသိပါ။
Source : Rain's Concert In Las Vegas
Jang Dong-gun goes under surgery in January
Jang Dong-gun ခွဲစိပ်ရမည်
မင်းသား Jang Dong-gun ဟာ ဇန်နဝါရီ လထဲမှာ ဒူးခေါင်း ခွဲစိပ် မှုပြု လုပ်မယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
၂၀၀၃ မှာ Taegukgi အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ခဲ့ စဉ်က ဒူးခေါင်း ထိခိုက် မိပြီး တစ်ကြိမ် ခွဲစပ် ခဲ့ရပြီး။ အခု ဒူးခေါင်းက ပြန်နာ လာလို့ ထပ်ပြီး ခွဲစိပ် ရတာ လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Jang Dong-gun goes under surgery in January
Song Hye-kyo is secretly practicing martial arts
မင်းသမီး Song Hye-kyo (အွန်စော) ဟာ လျှို့ဝှက် ပြီး သိုင်းကျင့် နေတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Bruce Lee နဲ့ အခြား အကျော် အမော် သိုင်းသမား ရာပေါင်း များစွာ ကို မွေးထုတ် ပေးခဲ့ တဲ့သိုင်း ဆရာကြီး အကြောင်း ရိုက်ကူးမဲ့ The Grand Master အမည် ရှိတဲ့ တရုတ် သိုင်းကား ကြီးမှာ Song Hye-kyo ပါဝင် သရုပ်ဆောင် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Bae Doo-na Receives Award From Japan Academy Prize
Bae Doo-na ဂျပန် အကယ်ဒမီ ဆုရခြင်း
ကိုးရီးယား မင်းသမီး Bae Doo-na ဟာ ဒါရိုက်တာ Hirokazu Koreeda ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ Air Doll အမည်ရှိ ဂျပန် ရုပ်ရှင် မှာ သရုပ်ဆောင် မှု အတွက် ဂျပန် နိုင်ငံ ကပေးတဲ့ အကယ်ဒမီ ဆုကို ရရှိ တယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
ဂျပန် ရုပ်ရှင် ရာဇဝင် မှာ နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦး ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ် အကယ်ဒမီ ဆုရ ခြင်းလည်း ဖြစ်တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Bae Doona Receives Award From Japan Academy Prize
Jumong မင်းသား Song Il-gook လျှော်ကြေးရရှိခြင်း
Jumong မင်းသား Song Il-gook ဟာ သူ့ကို မတရား စွပ်စွဲ ထားတဲ့ အမှု နိုင်လို့ လျှော်ကြေး တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
အမျိုးသမီး journalist တစ်ဦးက သူ့ကို လက်ရောက် ကျူးလွန် မှုနဲ့ တရား စွဲထား ပါတယ်။ Seoul Central District Court က မင်းသားကို အနိုင် ပေးခဲ့ ပါတယ်။ အမျိုး သမီး က မင်းသားသို့ won 100 million (US$1=W1,184) ပေးဖို့ပါ အမိန့် ချမှတ် ခဲ့ပါတယ်။i
Source : Song Il-gook Wins Damages Over False Assault Claim
"Seon-deok" wraps up final shooting
Queen Seon-deok နောက်ဆုံး episode ရိုက်ပြီးခြင်း
နာမည်ကျော် Queen Seon-deok ဇာတ်လမ်းတွဲ နောက်ဆုံး episode ရိုက်ကူး ပြသ ပြီးသွား ပြီး ဖြစ် ပါတယ်။
Episode one မှာ rating 15 သာရှိခဲ့ သော်လည်း လူကြိုက် များလာလို့ rating 44.7 အထိ ရရှီခဲ့ ပါတယ်။ Final episode မှာ rating 37.7 ရှိပါတယ်။
Lee Da-hae ပါဝင်တဲ့ The Slave Hunters ဇာတ်လမ်းတွဲ
Lee Da-hae (ချိုဝမ်) ပါဝင်တဲ့ The Slave Hunters ရာဇဝင် ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန် ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရနေ့က CJ CGV Theater မှာ ပြုလုပ် ပါတယ်။
မင်းသား Jang Hyeok မင်းသမီး Lee Da-hae တို့ ခေါင်းဆောင် ပါဝင် ပါတယ်။ ယခု episode 10 အထိ ရိုက်ကူး ပြီးထား ပြီးပြီ လို့ သိရ ပါတယ်။
Lee Da-hae returns through "The Slave Hunters"
Lee Min-ho စင်ကာပူ တွင် Fan Meet ပြုလုပ်ခြင်း
F4 မင်းသား Lee Min-ho ဟာ စင်ကာပူ မှာ မကြာသေး မှီက fan meet ပြုလုပ် ပါတယ်။ Fans ၂၀၀၀ ခန့်တက် ရောက် ပါတယ်။ Indonesia, Malaysia နဲ့ Thai နိုင်ငံ များမှ fans အများ အပြား လည်း လာရောက် ကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
မိတ်ဆုံ ပွဲမှာ Lee Min-ho ဟာ သီချင်း နှစ်ပုဒ် ဆိုသွား ပါတယ်။ စင်ကာပူ မတိုင် မှီက ဂျပန် နဲ့ ထိုင်ဝမ် တို့မှာ fan meet လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
Source : Lee Min-ho wraps up fan meeting in Singapore
ရိုးရာဂီတပညာရှင်မင်းသမီး Lee Honey
မင်းသမီး Lee Honey ဟာ အမေ အမ တို့နဲ့ တွဲပြီး ကိုးရီးယား ရိုးရာ concert ပွဲကို National Center of Traditional Performing Arts မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ က ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ်။
မိခင် Moon Jae-sook ဟာ Ewha Womans University မှာ ရိုးရာဂီတ professor တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ အစ်မ Seul-gi မှာ Korean traditional music ဘွဲ့ကို Seoul National University မှ ရရှိ ထားသူ ဖြစ် ပါတယ်။
Lee Honey ကိုယ်တိုင် မှာလည်း Seoul National University မှာ Korean traditional music ဘာသာ ယူထား သူဖြစ် ပါတယ်။
Source : Lee Honey to Hold Traditional Concert on Christmas
Ko Hyeon-jeong Named Best TV Star
အကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီး Ko Hyeon-jeong
Korea Gallup Pool ဆန္ဒ ခံယူတဲ့ စါရင်း အရ MBC TV ရဲ့ Queen Seon-deok ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာသရုပ် ဆောင် ခဲ့တဲ့ Ko Hyeon-jeong ကို မဲ 34.8% နဲ့ အကောင်းဆုံး TV သရုပ် ဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
KBS TV ရဲ့ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာသရုပ် ဆောင်ခဲ့ ကြတဲ့ မင်းသား Lee Byeong-Heon နဲ့ မင်းသမီး Kin Tae-hee တို့က 20.5% နဲ့ 16.3% အသီးသီး ရရှိပြီး၊ ဒုတိယ နဲ့ တတိယ ချိတ်ခဲ့ ကြ ပါတယ်။
Source : Ko Hyeon-jeong Named Best TV Star
Lee Byeong-heon Sued by Female Gymnast
Lee Byeong-heon တရားစွဲခံရခြင်း
Kwon လို့ အမည် ရှိတဲ့ Canadian နိုင်ငံသူ ကိုးရီးယား အမျိုးသမီး တစ်ဦးက မင်းသား Lee Byeong-heon ကို လက်ထပ် မည်ဟု ပေးခဲ့ သည့် ကတိ ဖေါက်ဖျက် မှုနဲ့ လျှော်ကျေး won million 100 ရလိုကြောင်း ကိုးရီးယား တရား ရုံးတော် တစ်ခု မှာ တရားစွဲ ဆိုထား ပါတယ်။
မင်းသား ကလည်း ခေတ္တ တွဲခဲ့ သော်လည်း မည်သည့် ကတိမှ မပေး ခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်း အမျိုး သမီးကို အသရေ ဖျက်မှုနဲ့ တန်ပြန် တရားစွဲ မည်ဖြစ် ကြောင်း ထုတ်ပြန် ထား ပါတယ်။
Lee Byeong-heon's Ex-Girlfriend Questioned
Lee Byeong-heon Saga Takes New Twist
Lee Byeong-heon Shares His Thoughts on Rumors
Woochi' Marks Birth of Korean Superhero
ကိုးရီးယား Harry Potter လား?
Woochi လို့အမည် ပေးထားတဲ့ ကိုးရီးယား မှော်ဆရာ ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားကို နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာ တစ်ဦး ဖြစ်သူ Choi Dong-hoon နဲ့ ရိုက်ဖို့ စီစဉ် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀၀ လောက်က ရှိခဲ့တယ် လို့ဆိုတဲ့ မှော်အတတ် ပညာ ပြကွက် တွေကို ခေတ်ပေါ် computer နည်းပညာ တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး အမြင်ဆန်း အောင်ရိုက် ထားတယ် လို့ဆို ပါတယ်။
Source : Woochi' Marks Birth of Korean Superhero
ဂျပန် စာရေးဆရာ-ပရိုဂျူဆာ Yasushi Akimot ရဲ့ အစီ အစဉ် နဲ့ super hallyu မင်းသားများ ဖြစ်တဲ့ Lee Byeong-Heon, Jang Dong-gun, Song Seung-heon နဲ့ Won Bin တို့ဟာ ဂျပန် နိုင်ငံ Tokyo Dome မှာ show ပွဲ ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။ ပရိသတ် ၇၀,၀၀၀ ကျော် တက်ရောက် ခဲ့ကြ တယ်လို့ ဆို ပါတယ်။
Show ပွဲပြီး နောက်နေ့ တွေမှာ မင်းသား များဟာ သူတို့ရဲ့ fan meets တွေကို အသီးသီး ပြုလုပ် ကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Hallyu '4Card' Tokyo Show Draws Attention
ကိုးရီးယား ကာ ကုမ္ပဏီ တွေဟာ မိမိ တို့ရဲ့ ကားအသစ် တွေကို နာမည်ကြီး ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း တွေမှာ ထဲ့ရိုက်ပြီး လူသိ များအောင် လုပ်လာ ပါတယ်။
ကားရဲ့ logo ပေါ်အောင် မရိုက်ရ ဆိုတဲ့ ဥပဒေ ပယ်ဖျက် ပြီးနောက် မှာ ခေတ်စား လာတာပါ။
ပြပြီး သွားတဲ့ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ကိုးရီးယား Kia Motors က သူတို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီ ထုတ်ကား ၁၉ စီး ထဲ့သွင်း ရိုက်ကူး သွားတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
Source : Product Placement Grows Popular in Korea
Lee Min-ho ရဲ့ထိုင်ဝမ် Fan Meet
F4 မင်းသား Lee Min-ho ရဲ့ ထိုင်ဝမ် fan meet ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့ က National Taiwan University Stadium မှာ ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။ Fans ၂၀၀၀ ကျော် တက်ရောက် ခဲ့တယ် လို့ သိရ ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ် ပြီးရင် စင်ကာပူ မှာ fan meet ဆက်လုပ်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
Source : 2000 Fans Rush to See Lee Min-ho
2NE1 အဆိုအဖွဲ့ Artist of the Year ရခြင်း
Online ကနေ သီချင်း ရောင်းတဲ့ Mnet.com က 2NE1 အဆို အဖွဲ့ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ရဲ့ Artist of the Year အဖြစ် သတ်မှတ် ပေးခဲ့ ပါတယ်။
၂၀၀၉ ဇန်နဝါရီ လမှ ဒီဇင်ဘာ လ အထိ online ပေါ်မှာ ရောင်းချ ရတဲ့ music chart တွေကို လေ့လာပြီး ဆုံးဖြတ် ခဲ့တာ ဖြစ် ပါတယ်။
Source : 2NE1 Picked Artist of the Year by Mnet
Yoona's Skirt Sells for Won2Million
ဂါဝန်တစ်ထည် Won2Million
Girls' Generation ရဲ့ပစ္စည်း ၁၆ မျိုးကို online ပေါ်မှာ လေလံတင် ရောင်းချ ခဲ့ရာတွင် လေလံ ဆွဲသူ ၂၃၀၀ ကျော် ရှိ ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ရောင်းရငွေ won 5.35 million ရရှိခဲ့ ပါတယ်။ (US$1=W1,184)
Yoona ရဲ့ mini skirt က won 2.01 million နဲ့ဈေး အများဆုံး ရခဲ့ ပါတယ်။
Tiffany ရဲ့ T-Shirt က 1.01 million won,
Seohyun ရဲ့ ဘောင်းဘီတို က 945,000 won,
Sooyoung ရဲ့ ခါပတ် က 456,000 won ရ ပါတယ်။
ရောင်းရငွေ များကို လှူမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Yoona's Skirt Sells for Won2Million
Awards ceremony draws A-list stars, politicians alike
ကိုးရီးယား အစိုးရ ရဲ့ Mass Culture & Media Research Group က နှစ်စဉ် အနုပညာ နဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဆု ၁၀ မျိုးပေး ပါတယ်။
Lee Byeong-Heon နဲ့ Kim Tae-hee တို့က IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ သရုပ်ဆောင် တော်လို့ အထူးဆု Special Award ကို ရရှိ ပါတယ်။
Girls' Generation အဖွဲ့က Musician of the Year,
MBC ရဲ့ North Pole's Tears က TV Program of the Year,
Dae Jang Geum က Musical of the Year ရပါတယ်။
Source : Awards ceremony draws A-list stars, politicians alike
Kim Tae-hee ၏ အင်တာဗျူး
KBS ရဲ့ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ last episode ပြပြီးနောက် တနေ့မှာ မင်းသမီး Kim Tae-hee နဲ့ သတင်းစာ ဆရာများ အမေး အဖြေ ပြုလုပ် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
ဇာတ်ညွှန်းက အစဉ်အတိုင်း မဟုတ်ပဲ ဖေါက်ပြီး ရိုက်ချင် သလိုရိုက် ခဲ့ရလို့ သူ့အနေနဲ့ အနုပညာ ဈာန်သွင်း ရတာ ခက်ကြောင်း၊ ဇာတ်ညွှန်း ကို အားလုံး ဖတ်ရတာ မဟုတ်ပဲ နီးလာမှ ကပ်ကပ် ပြီးမှ ရလို့ သူများ တွေလောက် မတော်တဲ့ သူ့အတွက် အလွန် ပင်ပန်း ရပါတယ် လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ရတာ စိတ်ကြိုက် မဟုတ် ပေမဲ့ သင်ခန်းစာ တော့ တော်တော် ရလိုက် ပါတယ်လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
Source : Kim Tae-hee says was "lifeless" before taking up acting
Girls' Generation ၏ပထမဆုံးသီးသန့် Show ပွဲ
Girls' Generation ၏ ပထမဆုံး သီးသန့် Show ပွဲကို Fencing Stadium, Olympic Park မှာပြု လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ အရင်က SM Entertainment ရဲ့အခြား music group တွေနဲ့ တွဲဆိုခဲ့ တာပါ။
ထိုင်ခုံ ၆၀၀၀ ပြည့်မှပြည့် ပါ့မလား လို့ပူခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရုံလျှံ သွားခဲ့ ပါတယ်။ သီချင်း ၃၇ ပုဒ်ကို သုံးနာရီ ကြာ အုပ်စုအလိုက် ရော တစ်ဦးချင်းပါ ဆိုသွား ကြပါတယ်။ အထူး အောင်မြင် တယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Girls' Generation Impresses Fans With First Concert
Yoo Named Comedian of the Year
Gallup Pool နဲ့ စစ်တမ်း ကောက်ယူ ရာမှာ Yoo Jae-seok ကို အကောင်းဆုံး ဟာသ ပညာရှင် Comedian of the Year အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ကြ ပါတယ်။ ဒီဆုကို ၅ နှစ် ဆက်တိုက် ရရှိ ခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
Source : Yoo Named Comedian of the Year
Cyber 'Detectives' Irk Celebrities
ကိုးရီးယား မှာ Netizen Crime Scene Investigation (NCSI) ဆိုတဲ့ online အပျော်ထမ်း စုံထောက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ထား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် တွေတော့ ဘယ်သူ တွေဆိုတာ တိတိ ကျကျ မသိပါ။
သူတို့ရဲ့ ဖေါ်ထုတ် မှုကြောင့် တချို့ အဖွဲ့အစည်း များ၏ မတရား ဖုံးဖိ ထားတဲ့ ကိစ္စ အများအပြား ကို ဖေါ်ထုတ် နိုင်ခဲ့ ကြ ပါတယ်။
သို့သော် ပုဂ္ဂလိက (personel matters) တွေကို အသေးစိပ် ဖေါ်ပြ လာကြတဲ့ အခါမှာ တော့ စည်းကျော် သလိုဖြစ် လာပါတယ်။ လူ့အခွင့် အရေး ကိုလည် ထိခိုက် တဲ့ ဆိုးကြိုးတွေ ဖြစ်ပေါ် လာပါတယ်။
Source : Cyber 'Detectives' Irk Celebrities
World's largest screen brings film scenes to life
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး ရုပ်ရှင် ပိတ်ကားကြီး ကို Seoul မြို့ Yeongdeungpo CGV multiplex တွင် တွေ့ရှိ နိုင်ပါတယ်။ အလျှား 31.38 မီတာ၊ အမြင့် 13 မီတာ ရှိပါသည်။ Guinness World Records စာရင်း ဝင် ပါတယ်။
နံရံကို ၃ ကြိမ်ဖွင့်ချ ပြီးမှ ပိတ်ကား ကြီးကို ရုံထဲ ရောက်အောင် သွင်းနိုင် ခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ ရုပ်ရှင်ရုံ ရဲ့ sound system ဟာ အလွန်ကောင် တယ်လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
Source : World's largest screen brings film scenes to life
ကိုးရီးယား Television Directors of Photography Association မှ Camera Director များမှ မင်းသား So Ji-sub ကို အကောင်းဆုံး မင်းသား နှင့် Lee Yo-won ကို အကောင်းဆုံး မင်းသမီး အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အကောင်ဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို Queen Seon-deok မှ ရရှိပြီး၊ ၄င်းဇာတ်လမ်း တွဲရဲ့ ဒါရိုက်တာ ၂ ဦး ကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဒါရိုက်တာများ အဖြစ်ရွေးခဲ့ ကြပါတယ်။
Source : So Ji-sub, Lee Yo-won Named Best Actors
Girl singers turns sexy
Yuri from Girl's Generation
အမျိုးသား အဆိုတော် များဟာ သီဆို နေရင်း အပေါ်ပိုင်း အဝတ်တွေ ကို ဆွဲချွတ်ပြီး သူတို့ရဲ့ ဗလကြီး တွေကို ပြတတ် ပါတယ်။
Girls Generation က Yuri ဟာ အမျိုးသား အဆိုတော် တွေကို တုပြီး အပေါ် ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း လုပ်လာတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
Ga-in of the Brown Eyed Girls pulls up shirt
ဒါက Brown Eyed Girls အဆို အဖွဲ့မှ မှ အဆိုတော် Ga-in ရဲ့ အလားတူ ပြကွက် နောက် တစ်မျိုးပါ။
အမျိုးသား အဆိုတော် များက အဝတ် ချွတ်ပြီး ဗလ ကြီးများပြ ကြတယ်။ အမျိုးသမီး အဆိုတော် များက တော့ -- အဲအဲ -- မပြောတော့ ပါဘူ။
Source : Girls Generation's Yuri turns sexy
Heechul is Han-kyung's girlfriend
Han-kyung ရဲ့ မိန်းခလေး Heechul
မှာကုန်မယ်နော်၊ Han-kyung ရော Heechul ပါ Super Junior အဖွဲ့ဝင် ယောက်ျား လေး အဆိုတော် တွေပါ။
Han-kyung က Super Junior အဖွဲ့ရဲ့ တစ်ဦး တည်းသော တရုတ် အမျိုးသား အဆိုတော်ပါ။ Heechul ကတော့ ပုံထဲမှာ မိန်းခလေး နဲ့ တော်တော် တူတယ်နော်။
ဟဲဟဲ -- အီစီကလီ တော့ မဟုတ်တန် ကောင်း ပါဘူ။
Source : Heechul is Han-kyung's girlfriend
Will Super Junior break up?
Super Junior အဖွဲ့ပျက်တော့မလား?
Super Junior အဖွဲ့ဝင် Han-kyung (တရုတ်နိုင်ငံသား) ဟာ သူ့ရဲ့ agency SM Entertainment နဲ့ တရားဆိုင် နေပါတယ်။ မတရား ခိုင်းစေ တယ်ဆိုပြီး အကြောင်း ပြထား ပါတယ်။
SM Entertainment လက်အောက် က TVXQ အဖွဲ့ဝင် Xiah, Micky နဲ့ Hero တို့ မကြာမှီ က SM Entertainment နဲ့ တရား ရင်ဆိုင် တဲ့ပုံစံ အတိုင်းပဲ လို့ဆို ပါတယ်။
ထို့အပြင် Super Junior အဖွဲ့ဝင် နောက်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Kang In ဟာလည်း မူးပြီး လူရိုက် ကားတိုက် မကြာ ခဏ ဖြစ်နေ ပါတယ်။
Jaebum Keeps Dancing
2PM ကနေ နှုတ်ထွက် သွားတဲ့ Jaebum နဲ့ သူ့အဖွဲ့ ဟာ Seattle, USA မှာပြုလုပ်တဲ့ Winter Nights battle in Seattle အက ပြိုင်ပွဲ မှာ ပထမ ဆုရတယ် လို့သိရ ပါတယ်။
Jaebum အခြေအနေ ကောင်းပြီး ပျော်နေ ပုံပါပဲ၊ သူ့ရဲ့ ကိုးရီးယား fan များဟာ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ က Jaebum ပြည်တော်ပြန် ရက် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်း အမှတ်ပွဲ ပြုလုပ် ကြပါတယ်။ သူပြန်လာ မဲ့ရက် ကိုလည်း မျှော်နေ ကြပါတယ်။
2PM's Jaebum knows what time it is
Jaebum Keeps Dancing Fans Commemorate Jaebum's 100 Days After Leaving Korea
Taeyeon Talks About Not Being the Leader
Girls Generation ရဲ့ ခေါင်းဆောင် Taeyeon ဟာ မိန်ခလေး များကို ထိန်းရတာ ခေါင်းခြောက် ပုံရ ပါတယ်။
သူဟာ ခေါင်းဆောင် မလုပ် လိုကြောင်း အဖွဲ့သားများ ကိုပြော ခဲ့ကြောင်း၊ အဖွဲ့သားများ က အင်းမလုပ် အဲမလုပ် ဖြစ်နေ ကြလို့ သူပဲဆက် ခေါင်းဆောင် နေရ ပါတယ် လို့ SBS variety show အစီအစဉ်မှာ ထုတ်ပြောသွာပါတယ်။
Taeyeon Steps Down from Leader Position
Brian's Drunken Confession
Fly to the Sky အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Brian ဟာ မူးပေါက် နေစဉ် မှာခဲ့တဲ့ ကိစ္စ တစ်ခုကို KBS ရဲ့ Star Golden Bell အစီအစဉ် မှာ ပြောသွား ပါတယ်။
မူးမူးနဲ့ ရည်းစားဟောင်း ၃ ယောက် ထံ "ကိုယ်မင်းကို ပဲအမြဲ သတိရနေ ပါတယ်" လို့ message ပို့ခဲ့ မိတယ် လို့ဆို ပါတယ်။
နောက်နေ့မှာ ၃ ယောက်စလုံး ထံမှ "Oppa, ပြန် စကြရ အောင်နော်" ဆိုတဲ့ message များလာတယ် ဆိုပဲ။ --- ဒုက္ခ ဒုက္ခ။
Source : Brian's Drunken Confession
So Ji-sub and Han Ji-min are Getting Married
So Ji-sub နဲ့ Han Ji-min ယူကြတော့မှာလား?
Cain and Abe ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ So Ji-sub နဲ့ Han Ji-min တို့ဟာ ပုံတူ စုံတွဲ လက်စွပ် (couple rings) များ ဝတ်ထား ကြလို့ ပရိသတ် က မေးခွန်းတွေ မေးလာကြ ပါတယ်။
နှစ်ဖက် agencies များကတော့ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆို ကြပါတယ်။ ဟုတ်ရင်တော့ အတော် ကြည့်လို့ ကောင်းမည့် အတွဲ ပါပဲ။
Source : So Ji-sub and Han Ji-min are Getting Married
Rain's Ideal Woman
ဂျပန် မှာလုပ်တဲ့ fan meet တစ်ခုမှာ Rain ဟာ သူနှစ်သက်တဲ့ အမျိုးသမီး ပုံစံကို ပုံဆွဲပြီး ပြခဲ့ ပါတယ်။ (အပေါ် ပုံကို ကြည့်ပါ)
အာလုံပဲ မျှော်လင့်ချက် မလျှော့ ကြနဲ့ နော် ဒီပုံနဲ့ တူရင် Rain ကကြိုက်မှာ။
Source : Who drew his ideal woman?
Han Ga-in's Comeback
Han Ga-in ပြန်လာပြီး
မင်းသမီး Han Ga-in ဟာ ၂၀၀၇ နှစ်က Witch Amusement ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကို နောက်ဆုံး ရိုက်ခဲ့ ပါတယ်။
အခု သူနဲ့ လိုက်ဖက်မည့် ဇာတ်လမ်းတွဲ ကိုရွေး နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။ ကမ်းလှမ်း ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကတော့ သုံးလေး ခုရှိ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Source : Han Ga-in's Comeback
Lee Hyori's Christmas Spirit
Lee Hyor ရဲ့Chrismas စိတ်ဓါတ်
အဆိုတော် Lee Hyo-ri ဟာ မရှိဆင်းရဲ ခလေးများ ကို Chrismas လက်ဆောင် ပို့ဖို့ စီစဉ် နေတဲ့ အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ မှာ လုပ်အား ပေးနေ ပါတယ်။
သူ့ကို အတုယူပြီး နေက်က လိုက်လုပ် ကြအောင် ရည်ရွယ် ပုံလည်း ရပါတယ်။
Source : Lee Hyori's Christmas Spirit
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/481/hot-news-31-dec-09
Hot News-11 Dec 09
Posted By - Ko Ko - December 11, 2009
Actor Bae Sues Travel Agency
မင်းသား Bae Yong-joon မှတရားစွဲခြင်း
မင်းသား Bae Yong-joon(37) ဟာ သူ့ရဲ့ ဓါတ်ပုံ ကို ခွင့်ပြုချက် မရပဲ သုံးပါတယ် ဆိုပြီး ကိုးရီးယား ခရီးသွား agency တစ်ခုကို တရားစွဲ ထားတယ် လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Actor Bae Sues Travel Agency
'Ninja Assassin' 8th
Rain ရဲ့ရုပ်ရှင် ၁ မှ ၁၀ ထဲတွင်စာရင်းပါလာခြင်း
Hollywood မှ ရိုက်တဲ့ Rain ခေါင်းဆောင် မင်းသား အဖြစ် ပါဝင်တဲ့ Ninja Assassin အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် ကို နိုဝင်ဘာ လကုန် တွင် ကမ္ဘာ လုံးမှာ ရုံတင် ခဲ့ ပါတယ်။
မူလက နံပါတ် ၆ နေရာမှာ ရှိခဲ့ ရာမှ အခုတော့ နံပါတ် ၈ နေရာမှာ ပြေးနေ ပါတယ်။ ၂ ပါတ် အတွင်းမှာ US$ 30 million ဝင်ငွေ ရခဲ့ တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : 'Ninja Assassin' 8th
Gong Yoo finished with military service
Gong Yoo လွတ်လာပြီး
စစ်မှုထမ်း ဥပဒေ အရ ၂ နှစ် စစ်မှု ထမ်းနေ ခဲ့တဲ့ မင်းသား Gong Yoo ဟာ တာဝန် ပြီးဆုံး သွားတဲ့ အတွက် အရပ်သား ပြန်ဖြစ် လာပါပြီး။
သူဟာ ကျန်းမာ နေတဲ့ အပြင် သူငယ်ချင်း များနဲ့ တွေ့ပြီး ပျော် နေတယ် လို့ဆို ပါတယ်။ အမေ ချက်တဲ့ ထမင်းဟင်း ကို စါပြီး တနေကုန် အိပ်နေတယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
မင်းသားဟာ စစ်ထဲ မဝင် ခင်မှာ Coffee Prince ဇာတ်လမ် တွဲကို နောက်ဆုံး ရိုက်ခဲ့ ပါတယ်။
Source : Gong Yoo finished with military service
Queen Seonkeok ဇာတ်လမ်း တွဲဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မှာ rating 35.3% နဲ့ လူကြိုက် အများ ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
SBS TV ရဲ့ Temptation of Wife 34.6% နဲ့ Shining Inheritance က 31.9% ရခဲ့ပြီး၊ KBS TV ရဲ့ IRIS က 30% rating အသီးသီး ရရှိ ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Queen Seonkeok ကို ပြဇာတ် အဖြစ် ပြန်လည် ပြသဖို့ စီစဉ် နေတယ် လို့လည်း သိရ ပါတယ်။
Source : Queen Seondeok
Kwon Sang-woo လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်လာပြီး
မင်းသား Kwon Sang-woo ဟာ Seoul မြို့ မှာ အလှကုန် ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖွင့်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာ TEARS အမည်ရှိ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမှတ် တံဆိပ် အလှကုန် တွေကို ရောင်းချ မှာဖြစ် ပါတယ်။
မင်းသမီး Choi Ji-woo နဲ့တွဲပြီး SBS-TV ဇာတ်လမ်းတွဲ Stairway to Heaven ရိုက်ခဲ့ စဉ်က သူ့ fans များက မင်းသားကို Mr. Tears လို့ nick name ပေးခဲ့ ကြ ပါတယ်။
ဒီလ ထဲ မှာပဲ Daegu နဲ Busan တို့မှာ ဆိုင်ခွဲတွေ ဖွင့်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ အောင်မြင်မှု အခြေ အနေ ကို ကြည့်ပြီး၊ ပြင်ပ နိုင်ငံ တွေမှာပါ ဆိုင်ခွဲတွေ ဖွင်နိုင်ရန် မျှော်မှန်း ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်
Source : Kwon Sang-woo Becomes Entrepreneur
မင်းသမီး Choi Ji-woo နဲ့သူ့ရဲ့ဇာတိမြေ Busan
မင်းသမီး Choi Ji-woo ဟာ Butan ဇာတိ သူဖြစ် ပါတယ်။ သူ့ကို Butan မြို့က Public Relation Ambassador ခန့်ထား ပါတယ်၊
Butan မြို့တော်ဝန် နဲ့ ပူးပေါင်း ပြီး ဇာတိ မြို့သို့ tourist အဝင် များအောင် promotion တွေ လုပ်နေ ပါတယ်။
Choi Ji-woo ဟာ မင်းသား Bae Yong-joon နဲ့တွဲ ရိုက်ခဲ့တဲ့ Winter Sonata ဇာတ်လမ်း တွဲမှာ နာမည် ကြီးလာတဲ့ မင်းသမီး ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Choi Ji-woo to Publicize Her Hometown, Busan
မင်းသား Kim Myeong-min နဲ့ မင်းသမီး Ha Ji-won တို့ကို အကြိမ် ၃၀ မြောက် Blue Dragon Awards ပွဲတော် မှ ၂၀၀၉ ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် မင်းးသား မင်းသမီး များ အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ပါတယ်။
Kim Myeong-min ဟာ Immortal Admiral ရာဇဝင် ဇာတ်လမ်တွဲး နဲ့ နာမည် ရလာတဲ့ မင်းသား ဖြစ် ပါတယ်။
မင်းသမီး Ha Ji-won ဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် က Blue Dragon Awards ရဲ့ အကောင်းဆုံး အရံ မင်းသမီး (Best Supporting Actress) ဆုကို ရခဲ့ဖူး ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ Park Jin-pyo ရဲ့ Closer to Heaven ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင် ခဲ့ကြ တာဖြစ် ပါတယ်။
Source : 'Closer to Heaven' Couple Win Best Acting Nods
အကြိမ် ၃၀ မြောက် Blue Dragon Awards ပွဲတော် မှ ဒါရိုက်တာ Bong Joon-ho ရဲ့ (Mother-2009) ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ ပါတယ်။
အမေ အဖြစ် မင်းသမီ ကြီး Kim Hye-ja နဲ့ သားအဖြစ် မင်းသား Won Bin (ထယ်စောက်) တို့မှ ပါဝင် သရုပ် ဆောင် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Source : 'Mother - 2009' Sweeps Blue Dragon Awards
မင်းသား Choi Min-soo H1N1 တုပ်ကွေးဖြစ်ခြင်း
မင်းသား Choi Min-soo နဲ့ သူ့ရဲ့ သားကြီး ဟာ H1N1 တုပ်ကွေး ဖြစ်ခဲ့ ကြ ပါတယ်. ဇနီး နဲ့ သားငယ် ကတော့ ကာကွယ်ဆေး အထိုး မြန်လို့ ရောဂါ မရ ခဲ့ကြပါ။ အခုတော့ အားလုံး နေကောင် သွားကြ ပြီးလို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Actor Choi Min-soo's Family Overcomes Flu
မင်းသမီး Ha Ji-won အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုရရှိခြင်း
5th University Film Festival က ချီးမြှင့်တဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် မင်းသမီး ဆုကို မင်းသမီး Ha Ji-won မှ ရရှိ ခဲ့ ပါတယ်။
မင်းသမီး Ha Ji-won က်ို အကြိမ် ၃၀ မြောက် Blue Dragon Awards ပွဲတော် မှလည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်ရဲ့ အကောင်း ဆုံး ရုပ်ရှင် မင်းသမီး အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် မှာ ဝင်ငွေတွေ စံချိန် တင်ခဲ့ ကြတဲ့ ရုပ်ရှင် များဖြစ် ကြတဲ့ Haeundae နဲ့ Closer to Heaven တို့မှာ Ha Ji-won ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး အဖြစ် သရုပ် ဆောင်ခဲ့ ပါတယ်။
Source : Ha Ji-won Wins 1st Best Actress Award
Jackie Chan Appears at Rain Concert
Jackie Chan မှ Rain ၏ Show ပွဲသို့တက်ရောက်ခြင်း
Rain ဟာ ဟောင်ကောင် မှာ Legend of Rainism အမည် နဲ့ music tour ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ်။ ဒုတိယ နေ့မှာ Rain ဟာ နာမည်ကျော် Rainism သီချင်း သီဆိုဖို့ လုပ်နေ ပါတယ်။
မမျှော် လင့်ပဲ စင်မြင့် ပေါ်ကို Jackie Chan ပန်းစီး ကိုင်ပြီး တက်လာတာ တွေ့လိုက် ကြ ရ ပါတယ်။
ကျွန်တော် Rain က်ို ပွေ့ဖက် အားပေး ချင်လို့ လာခဲ့ တာပါ။ အခုပဲ လေယာဉ် အမှီ သွားရ တော့မှာမို့ ခွင့်လွှတ် ပေးကြ ပါလို့ Jackie Chan က ပြောလိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့ Rain ကို ပွေ့ဖက် နုတ်ဆက် ပြီး စင်ပေါ်က ဆင်းသွား ပါတယ်။
Jackie Chan ဟာ ကမ္ဘာ ကျော်ဆဲ ပထမ မျိုးဆက် (first generation) မင်းသား ကြီး ဖြစ် ပါတယ်။ ဒုတိယ မျိုးဆက် (second generation) ဖြစ်တဲ့ Rain နေရာက ကြည့်ရင် တော့ အခုလို လာပြီး နုတ်ဆက် တာဟာ ကြီးမား သော ချီးမြှောက်မှု ကြီးဖြစ် ပါတယ်။
Source : Jackie Chan Appears at Rain Concert
IRIS အမှတ် ၂ လာမည်
မင်းသား Lee Byeong-Heon နဲ့ မင်းသမီး Kim Tae-hee တို့ ပါဝင်တဲ့ ပြသဆဲ IRIS တီဗွီ ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ အလွန် လူကြိုက် များ ပါတယ်။
IRIS Season2 (အမှတ် ၂) ကို လာမဲ့နှစ် မေလ မှာ ထပ်မံ ထုတ်လွှင့် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ အမှတ် ၂ မှာတော့ အခြား ပွဲဆက် တွေ ရှီနေ လို့ မင်းသား Lee Byeong-Heon မပါ တော့ဘူး လို့သိရ ပါတယ်။
Source : Season2of 'Iris' Due Next Year
Kim Hye-ja ဆုများဆက်တိုက်ဆွတ်ခူးခဲ့ခြင်း
Australia နိုင်ငံ Queensland ပြည်နယ် မှာ ကျင်းပ ခဲ့တဲ့ 3rd Annual Asia Pacific Screen Awards က မင်းသမီးကြီး Kim Hye-ja(68) ကို အကောင်းဆုံး မင်းသမီး ဆု ချီးမြှင့် ခဲ့ ပါတယ်။
Kim Hye-ja ဟာ Blue Dragon Awards, China Golden Rooster နဲ့ Hundred Flowers Film Festival တို့မှလည်း အလားတူ ဆုများ ရရှိ ခဲ့ပြီး ဖြစ် ပါတယ်။
ဒီဆု တွေဟာ ဒါရိုက်တာ Bong Joon-ho ရိုက်ကူးတဲ့ Mother-2009 မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ အတွက် ရရှိ ခဲ့တာပါ။
Source : Kim Hye-ja Named Best Actress at Asia-Pacific Fest
Yoona Thinks She is the Prettiest
KBS 2TV variety program မှာ လုပ်တဲ့ အမေး အဖြေ အခန်း မှာ။ Girls Generation အဖွဲ့မှာ ဘယ်သူ အလှဆုံး လဲ လို့မေး ခဲ့ ပါတယ်။ Girls Generation အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်တဲ့ Yoona က ကျွန်မ အလှ ဆုံးပါ လို့ ဖြေခဲ့ တယ်လို့ ဆို ပါတယ်။
Source : Yoona Thinks She’s the Prettiest
Wonder Girls hit U.S. television
Wonder Girls အဖွဲ့ USA တီဗွီအစီအစဉ်တွင်ဖျြဖျာ်ခြင်
ဒီဇင်သာ ၉ ရက်နေ့ မှာ ထုတ်လွှင့် ခဲ့တဲ့ U.S.A တီဗွီ channel FOX ရဲ့ So you think you can dance အစီအစဉ် မှာ Wonder Girls တီးဝိုင်း အဖွဲ့ က Nobody သီချင်း နဲ့ တက်ရောက် သီဆို ခဲ့ ပါတယ်။
Nobody ဟာ copy 30, 000 ကျော် ရောင်းချ ခဲ့ရပြီး အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက် Billboard Hot 100 singles chart မှာ အဆင့် ၇၆ ရခဲ့ ပါတယ်။ ကိုးရီးယား ဂီတ ရာဇဝင် မှာ ပထမ ဆုံး Billboard Hot 100 စါရင်း ဝင်ခဲ့ ခြင်းဖြစ် ပါတယ်
Source : Wonder Girls hit U.S. television
Infinity Challenge 2010 calender isamoney maker
ကိုးရီးယား မှာ calander ဆိုတာ ဝယ်စရာ မလိုပါ၊ အလကား ရတဲ့ ပစ္စည်းပါ၊ Infinity Challenge အမည် ရှိတဲ့ TV variety show က ရောင်းတဲ့ calander ကတော့ အလွန် ရောင်းကောင်း နေပါတယ်။
တခုကို won ၁၀,၀၀၀ လောက် ပေးရတဲ့ Infinity Challenge Calander ဟာ ၃ ရက် အတွင်းမှာ စောင်ရေ ၃၀, ၀၀၀ ကျော် ရောင်းခဲ့ ရပြီး ဖြစ် ပါတယ်။
1.5 billion won (about 1.2 million USD) လောက် ရောင်းရ မယ်လို့ ခန့်မှန်း ထား ပါတယ်။ ရောင်းရငွေ အားလုံးကို Africa က ခလေး တွေ အတွက် လှူမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Infinity Challenge 2010 calender isamoney maker
Daniel Henney will not practice medicine on CBS
Daniel Henney ဆရာဝန်လိုင်စင်ပြုတ်သွားခြင်း
USA CBS တီဗွီ မှာ ပြနေတဲ့ Three Rivers ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ မင်းသား Daniel Henney ဟာ ဆရာဝန် တစ်ဦး အနေနဲ့ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေပါတယ်။
Three Rivers ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာ လူကြည့် နည်းလို့ ပြသခြင်းရပ်ဆိုင်း လိုက်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Daniel Henney ဆရာဝန်လိုင်စင်ပြုတ်သွား ပါပြီး လို့ ဆိုလိုက် ရတာပါ။
Source : Daniel Henney will not practice medicine on CBS
MBLAQ eyes Japan
Rain တည်ထောင် ထားတဲ့ MBLAQ တီဝိုင်းအဖွဲ့ ဟာ ဂျပန် ဖက်ကို ခြေဦး လှည့်ဖို့ ပြင်နေ ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက် နေ့မှာ Rain ဟာ Tokyo International Forum မှာ fan meet လုပ်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ MBLAQ တီဝိုင်းအဖွဲ့ ကို ဂျပန် ပရိသတ် နဲ့ မိတ်ဆက် ပေးမှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဂျပန် Mnet တီဗွီ ရဲ့ 2010 K-POP Star အစီအစဉ် မှာလည်း promotion အနေနဲ့ ပါဝင် တင်ဆက် မှာလို့ သိရ ပါတယ်။
Source : MBLAQ eyes Japan
Lee Byung-Heon Meets the President
Lee Byung-heon သမတ ညနေစာ စားပွဲသို့တက်ရောက်ခြင်း
မင်းသား Lee Byung-heon ကို ကိုးရီယား သမတ အိမ်တော် မှာ ပြုလုပ်မဲ့ ညနေစာ စားပွဲ supper (evening meal) သို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြား ခဲ့ ပါတယ်။ ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံ သမတ Lászlo Solyom အတွက် ပြုလုပ်တဲ့ ညနေစာ စားပွဲ ဖြစ် ပါတယ်။
မကြာမှီ က ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံ Budapest မြို့တော် မှာ Lee Byung-heon ပါဝင်တဲ့ IRIS ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း အချို့ကို ရိုက်ကူးခဲ့ ပါတယ်။ ဟန်ဂေရီ သမတ ဟာ မင်းသား ရဲ့ အကြောင်းကို ထိုစဉ် ကထဲက သိနေ ပုံရ ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် မင်းသားကို ဖိတ်တာလို့ ခန့်မှန်း နေကြ ပါတယ်။ မင်းသား Lee Byung-heon ဟာ အဖိတ်ကြား ခံရတဲ့ တစ်ဦး တည်းသော ကိုးရီးယား အနုပညာ သည်ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Lee Byung-Heon Meets the President
Sunny of Girls Generation doesn’t wash
Girls Generation တီးဝိုင်း အဖွဲ့ဟာ 1 night,2days အစီအစဉ် ရိုက်ကြ ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် အားလုံး မိတ်ကပ် လိမ်းပြီး ရိုက်ကြ ပါတယ်။
တနေ ကုန်တော့ နောက်နေ့ ဆက်ရိုက်ဖို့ တစ်ည နားကြ ပါတယ်။ မနက် ကျတော့ အားလုံး မိတ်ကပ် မလိမ်း ရသေးခင် Sunny တစ်ယောက် ထဲ မိတ်ကပ် လိမ်းပြီး အဆင်သင့် ဖြစ် နေတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
စစ်ဆေး ကြည့်တော့ Sunny ဟာ ဖျက်ပစ် ရမှာ နှမျော လို့ ဆိုပြီး ညကရော မနက် မှာပါ မျက်နှာ မသစ်ဖူး ဆိုပဲ။ (dirty huh??)
Source : Sunny of Girls Generation doesn’t wash
Younha’s first solo concert
Younha ရဲ့ပထမဆုံး concert ပွဲ
Younha ရဲ့ Christmas themed concert ကို Melon Ax Hall မှာ ဒီဇင်ဘာ လ ၂၅ ရက်နေ့ မှာ ပြုလုပ် မှာဖြစ် ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမ ဦးဆုံး concert လည်းဖြစ် ပါတယ်။ ကိုးရီးယား နဲ့ ဂျပန် လိုပါ သီချင်း တော်တော် များများ ဆိုမယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Younha’s first solo concert
Mnet Asian Music Awards Red Carpet
Mnet Asian Music Awards (MAMA) ဆုပေးပွဲး
နိုဝင်ဘာ လ ၂၁ ရက်နေ့က Seoul မြို့ Jamsil Indoor Stadium မှာ Mnet Asian Music Awards (MAMA) ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ ပါတယ်။
နာမည် ကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့ Lee Hyori တို့ Son Dambi တို့ မလာ ကြတဲ့ အပြင်။ SM entertainment နဲ့ trot singers တွေက သပိတ်မှောက် ကြ ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ပွဲဟာ စည်စည် ကားကား နဲ့ အောင်မြင် တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ဆုရသူ နဲ့ အဖွဲ့ တွေကတော့ အောက် ဖေါ်ပြပါ အတိုင်း ဖြစ် ပါတယ်၊
Best Artist: 2PM
Best Album: G-dragon
Best song: “I don’t care” 2NE1
Best Male Singer: Drunken Tiger
Best Female Singer: Baek Ji-young
Best Mixed Group: 8eight
Best Asian Star: Dong-bang-shin-ki
Best Asian Composer: Park Jin-young
Best Male Newcomer: Supreme Team
Best Female Newcomer: 2NE1
Best Ballad and Music: Kim Taewoo
Best House and Electronic Music: Brown Eyed Girls
Best Rock: Buhwal
Best Dance Music: Kara (Honey)
Best Hiphop: LeeSsang
Best Trot: Hong Jin-young (Love’s Battery)
Best Music Video: 2NE1 (Fire)
Source : Mnet Asian Music Awards Red Carpet
Is Jaebum Expelled?
2PM အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဟောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံသား Jaebum(22) ဟာ နှုတ်ထွက် ပြီးနောက် နေရပ် USA ပြန်သွား ပါတယ်။
ကိုးရီးယား မှာ နေစဉ် Seoul မြို့ Dankook University မှာ တက်နေ ပါတယ်။ စပ်စုတဲ့ Jaebum ရဲ့ fans တွေက ၄င်း တက္ကသ်ုလ် မှာ Jaebum ရဲ့ စါရင်း ရှိသေးလား လို့ သွားမေး ကြ ပါတယ်။
ကျောင်းကတော့ ပြန်ဖြေ ဖို့ ငြင်းဆန် ပါတယ်။ ကျောင်းပျက်ရက် များရင်တော့ ထုံးစံ အရ ဆိုရင် ကျောင်းထုတ် ပစ်ရ ပါတယ်။
Jaebum ကို ကျောင်းထုတ် လိုက်ပြီးလား ??
Source : Is Jaebum Expelled?
The ideal woman: Son Ye-jin and Yoona
အမျီုးသမီး အဆိုတော် နဲ့ မင်းသမီး များထဲမှ စံပြ မိန်းခလေး ရွေးခိုင်း ပါတယ်။
ရွေးချယ်တဲ့ သူများ ကတော့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဖေါ် ကိုင်ဘက် အမျိုးသား အဆိုတော် နဲ့ မင်းသားများ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
Son Ye-jin နဲ့ Yoona တို့ကို စံပြ မိန်းခလေး များ အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့ကြ ပါတယ်။
Source : The ideal woman: Son Ye-jin and Yoona
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/480/hot-news-11-dec-09
Hot News-02 Dec 09
Posted By - Ko Ko - December 2, 2009
မင်းသမီး Park Si-yeon နဲ့ မေါ်ဒယ်/မင်းသား Lee Philip တို့ တွဲနေ ကြတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း တွေ ထွက်နေ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကာယကံ ရှင်တွေ က ကိုယ်စလှယ် agencies များမှ တဆင့် မဟုတ် ကြောင်းငြင်း ဆိုသွား ပါတယ်။ အလွန် ခင်မင် ကြတဲ့ သူငယ်ချင်း များသာ ဖြစ်ပါ တယ်တဲ့။
Source : Actress Park Si-yeon, Lee Philip Deny Dating
Actress Kim Min-seon Changes Name to Gyoo-ri
မင်းသမီး Kim Min-seon နာမည်ပြောင်းခြင်း
မင်းသမီး Kim Min-seon ဟာ သူ့ နာမည် ကို ငယ်နာမည် ဖြစ်တဲ့ Kim Gyoo-ri သို့ တရားဝင် ပြောင်းလိုက် ပါတယ်။ မှတ်ပုံလည်း တင်ပြီးပြီး လို့ သိရ ပါတယ်။ နောင် သရုပ်ဆောင် တဲ့ အခါ Kim Gyoo-ri ဆိုတဲ့ နာမည် ကိုပဲ သုံးမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Actress Kim Min-seon Changes Name to Gyoo-ri
Even Rain can't save this dull tale of ninja killers
ရာဇဝင် မှာ Ninja တွေဟာ လူသတ် သမား အောက်တန်းစား တွေသာ ဖြစ် ပါတယ် လို့ ဝေဖန်သူ တစ်ဦးက ဆို ပါတယ်။
၁၅-၁၆ ရာစုနှစ် များက ဂျပန် မှာ ပြည်တွင်းစစ် အကြီး အကျယ် ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ထိုစဉ်က ninja များ စတင် ပေါ်ပေါက် ခဲ့ ပါတယ်။
Ninja များဟာ အရှင် သခင် များ အတွက် ငွေယူ ပြီး လူသတ် ပေးတဲ့ ကြေစား လူသတ် သမား များသာ ဖြစ်ကြလို့ Rain နဲ့ သူ့ရဲ့ Ninja Assassin ရုပ်ရှင် ကလည်း ကယ်တင် နိုင်မှာ မဟုတ် ပါဘူး လို့ ဝေဖန်သူ က ရေးသွား ပါတယ်။
Source : Even Rain can't save this dull tale of ninja killers
Audiences switch off after drama's femme fatale dies
Queen Seon-deok ကြည့်သူနည်းသွားခြင်း
TV ဇာတ်လမ်းတွဲ Queen Seon-deok ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့ ပြတဲ့ episode မှာ အဓိက ဇာတ်ကောင် Mishil သေသွား ပါတယ်။
Mishil အဖြစ် နာမည်ကြီး မင်းသမီး Ko Hyeon-jeong က သရုပ်ဆောင် ခဲ့ ပါတယ်။ Mishil သေသွား တဲ့နောက် မှာတော့ ကြည့်သူ ပရိသတ် ထိုးဆင်း သွာတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Audiences switch off after drama's femme fatale dies
Bae Yong-joon စားသောက်ဆိုင်ထပ်ဖွင့်ခြင်း
မင်းသား Bae Yong-joon ဟာ မကြာမှီ က ဂျပန် မှာ သူ့ရဲ့ တတိယ မြောက် ကိုးရီးယား စားသောက် ဆိုင်ကို ဖွင့်လိုက် ပါတယ်။
Bae Yong-joon ကို ဂျပန် မှာ လူကြိုက် အလွန် များပါတယ်။ သူ့ကို ချစ်စနိုး နဲ့ Yonsama လို့ ခေါ်ကြ ပါတယ်။
Source : Bae's Food Chain in Japan
Daul Kim Apparently Committed Suicide, Says Agency
မိုဒယ် Daul Kim သေဆုံးခြင်း
ကမ္ဘာ့ အဆင့်မှီ ကိုးရီးယား မိုဒယ် Daul Kim ဟာ နီုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ က Paris မြို့မှာ သေဆုံး သွား ပါတယ်။ မိမိ ကိုယ် မိမိ သတ်သေ သွားတာ ဖြစိတယ် လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : Daul Kim Apparently Committed Suicide, Says Agency
Pucca Set to Conquer the World
ချစ်စဖွယ် Pucca လေးနာမည်ကျော်လာခြင်း
ကိုးရီးယား မှာ online ကာတွန်း ရုပ်ရှင် အဖြစ် စတင် ခဲ့တဲ့ ကာတွန်း မင်းသမီး လေး Picca ဟာ ကမ္ဘာ ကျော်လာ ပါပြီး။
Pucca ရုပ်ရှင် တွေကို USA မှာ Walt Disney က ပုံမှန် ထုတ်လွှင့် ပေးနေ ပါတယ်။ Warner Bros. Consumer Products (WBCP) ဟာ မကြာမှီ က Pucca ပိုင်ရှင် Vooz Co. နဲ့ လိုင်စင် သဘောတူညီ ချက်တွေ တိုးချဲ့ ချုပ်ဆို လိုက် ပါတယ်။
Warner Bros. က Pucca ပုံပါတဲ့ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းတွေ အများ အပြား ထုတ်လုတ် သွားတော့ မှာ ဖြစိ ပါတယ်။
Source : Pucca Set to Conquer the World
ကိုးရီးယားရှေးရိုးအဆိုပညာရှင် Lee Honey
မင်းသမီး Lee Honey ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ကိုးရီးယား မယ်ဖြစ် ပါတယ်။ ထို့ပြင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့မယ် ရွေးပွဲ မှာ စတုထ္ထ ချိတ်ခဲ့ ပါတယ်။
သူဟာ ကိုးရီးယား ရှေးရိုး အဆိုပညာ ရှင်လည်း ဖြစ် ပါတယ်။ Seoul National University မှာ ကိုးရီးယား ရှေးရိုး အဆိုပညာ နဲ့ Master တက်နေ ပါတယ်။
Lee Honey ရဲ့ မိခင် ဟာ Ewha Womans University မှာ ကိုးရီးယား ရှေးရိုး အဆိုပညာ professor ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Lee Honey on Her Love for the Gayageum
Hollywood Cinema အမည် ရှိတဲ့ ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဟာ Seoul မြို့မှာ အသက် ကြီးသူ (senior citizen) များ အတွက် သီးသန့် ရုပ်ရှင် ရုံ ၃ ရုံ ဖွင့်လှစ် ပေးထား ပါတယ်။
အပတ်စဉ် တနင်္လာ ညနေတိုင်း သက်ကြီး ရွယ်အို များ အတွက် ဒီသုံးရုံ မှာ free show ပြပေး ပါတယ်။ ဦးသူ အရင်ဝင် စနစ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် သက်ကြီး ရွယ်အို များဟာ အစောကြီး လာ တန်စီ ကြတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Seniors-Only Cinema Growing Popular
T-ara မှ Jiyeon မင်းသမီးဖြစ်ပြီး
အခုမှ အသစ် ဖွဲ့ထားတဲ့ T-ara မှ Jiyeon(16) ကို KBS 2TV မှ ဇန်နဝါရီ လဆန်း မှာ ပြသမဲ့ God of Studies အမည် ရှိတဲ့ TV ဇာတ်လမ်း တွဲ အတွက် ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး အဖြစ် ရွေးချယ်ထား ပါတယ်။ မင်းသား က Yoo Seung-ho ဖြစ် ပါတယ်။
Source : Jiyeon in TV Drama
All TVXQ Members to Perform in Japan
TVXQ အဖွဲ့ Music Show ပြုလုပ်ခြင်း
ပျက်တော့ မယ်လို့ သတင်း ထွက်နေ တဲ့ TVXQ အဖွဲ့ဝင် ၅ဦး စလုံး ပါတဲ့ music show ကို မကြာမှီ က ဂျပန် မှာကျင်း ပသွား ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင် ၃ဦး ဟာ သူတို့ရဲ့ အေဂျင်စီ SM Entertainment နဲ့ အမှု ဖြစ်နေ လို့ TVXQ အဖွဲ့ ပျကိတော့ မယ်လို့ သတင်းတွေ ဖြစ်နေ ခဲ့ ပါတယ်။
နောက် music show တစ်ခုကို ဒီဇင်ဘာ လ ထဲမှာ ထပ်လုပိ ဦးမာ် လို့ ဆို ပါတယ်။
Source : All TVXQ Members to Perform in Japan
JYP Entertainment အဆိုအဖွဲ့များတရုတ်ပြည်သို့သွားကြခြင်
JYP Entertainment ရဲ့ အဆို အဖွဲ့ မျာဖြစ် ကြတဲ့ Wheesung, f(x), 2PM, 2AM, U-Kiss နဲ့ 4Minute တို့ဟာ China ကို ဖြေဖျော် ရေးတွေ လုပ်ဖို့ သွားကြ တယ်လို့ သတင်း ရရှိ ပါတယ်။
Source : K-Pop Stars Head to Shanghai for Concert
3 TVXQ Members in MAMA
Xiah, Micky နဲ့ Hero တို့ 2009 Mnet Award ပွဲတက်ရောက်ခြင်း
2009 Mnet Asian Music Award မှာ မပါ ဝင်ပဲ သပိတ် မှောက်ဖို့ SM Entertainment အဖွဲ့ က ဆုံးဖြတ် ခဲ့ ပါတယ်။
သို့သော် SM Entertainment နဲ့ အမှု ဖြစ်နေ တဲ့ TVXQ အဖွဲ့ မှ Xiah, Micky နဲ့ Heroတို့ ဆုပေး ပွဲကို တက်ရောက် လာတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
အမှု ဆိုင်တဲ့ ထဲမှာ မပါတဲ့ TVXQ အဖွဲ့ဝင် U-Know နဲ့ Max တို့ ဆုပေးပွဲ တက်ရောက် ခြင်း မရှိ ကြပါ။
Source :3TVXQ Members in MAMA
အီရန် နိုင်ငံ မှာ ကိုးရီးယား ရုပ်ရှင် နဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေ အလွန် ခေတ်စား နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
အီရန် တွေဟာ သူတို့ နှစ်သက် တဲ့ မင်းသား မင်းသမီး တွေ အတွက် အီရန် ဘာသာ နဲ့ website အများ အပြား တင်ထား ကြ ပါတယ်။
ကိုးရီးယား DVD တွေ ဟာလည်း online မှာ အကြီး အကျယ် အရောင်း အဝယ် ဖြစ် နေတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Korean Movies: Cultural Envoys for Iran
TVXQ အဖွဲ့ဝင် Hero ပါဝင်တဲ့ Postman to Heaven ရုပ်ရှင် ရဲ့ press show ကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ က ပြုလုပ် ခဲ့ ပါတယ်။ မင်းသမီး က Han Hyo-joo ဖြစ် ပါတယ်။ Postman to Heaven ကို ရုပ်ရှင် နဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ အဖြစ်ပါ နှစ်မျိုး စလုံး ထုတ်လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။
Source : TVXQ's Hero Debuts as Actor
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/479/hot-news-02-dec-09
Rendering time 0.0311 sec